June 18, 2010 at 12:51 am 1 comment
်ပဉ္စပါပီ အကြောင်းကို နှစ်သက်စရာဖြစ်အောင်ရေးဖွဲ့ ထားတဲ့ ဆရာရွှေတိုင်ညွန့် ရဲ့  သီချင်းလေးပါ။
ပါရမီ စာဂီ ပါရမီထူးပါပေသည်……ဖူးစာတော်ရေး ရှေးကံဖန်တော့သည် ..အသားကောင်းခြင်းနဲ့ ညီ အသွေးကောင်းခြင်းနဲ့ ညီ ရှေးရာဇ၀င်မှာ ထင်ပေါ်သည် လူတိုင်းလည်းပဲသိပေမည် မြတ်တဲ့ရာဇာမင်းသည် ထင်အလင်းပဲနှစ်သက်ပြီ သြော် …အတွေ့ မှာထူးလို့ ရွှေဖူးစာကညီ ပေါင်းဖော်ကြသည်။
Entry filed under: သီချင်းများ, ရှေးဟောင်းသီချင်းများ.
မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ( ၁၁)	မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၁၂)
1. စာဖတ်သူ | August 7, 2010 at 10:37 am
အမရေ … စာလာဖတ်သွားတယ် .. ဂျာနယ်ကျော်မမလေး အပိုင်းတွေဖတ်ရတာကျေးဇူးပါ… အစားအသောက်လေးတွေလည်းတင်ပါဦးနော် 🙂